Part I. The oj oo maka nzacha na mkpocha iTunes
Part II. Olee otú nhicha iTunes Library na TunesGo
Part III. Ndị ọzọ Good Ọrụ maka TunesGo
Mgbe afọ nke nbudata music si iTunes, importing na exporting faịlụ site na otu ngwaọrụ ọzọ, gị ọbá akwụkwọ amalite na-achọ ka a tonado kụrụ ya. Iji aka nhicha na oke iTunes n'ọbá akwụkwọ jupụtara tracks na-efu metadata, ID3 mkpado, album mkpuchite, na oyiri tracks pụrụ ịghọ na-ewe oge na ruthlessly-agwụ ike. E nwere ọtụtụ nsogbu na-abịa gafee gị ụzọ nke orchestrating gị music n'ọbá akwụkwọ. A ole na ole nke nsogbu chere ihu ọtụtụ ndị music n'anya gadget ọrụ na-depụtara n'okpuru:
• The keukwu ọbá akwụkwọ ahụ nwere tracks na-efu metadata ọmụma, album mkpuchite na elu ya niile oyiri faịlụ. Nhicha narị otu narị na ọtụtụ puku tracks aka na-aghọ onye Uphill agha.
• enweghị nri ngwá ọrụ, ọ na-aghọ siri ike ịhụ ndị na-efu album ekpuchi.
• Dị ka nhicha ahụ n'ọbá akwụkwọ aka nwere adịghị ike ụmụ mmadụ, na-ejuputa na-efu metadata ọmụma na-aghọ ike.
• Otu n'ime isi nsogbu na-ihu dewe iTunes Library bụ iji bulie ziri ezi na ngwa na-edozi gị niile mbipụta.
• The odious ọrụ nke ijikwa esetị iTunes n'ọbá akwụkwọ nwere ike simplified site na iji a kwesịrị ekwesị music ahazi software ngwa.
A mma obibia hazie gị media collection bụ iji omume na-eme n'ala ọrụ maka gị. Otu nke kasị mma uzo ozo maka nhicha gị colossal iTunes Library bụ TunesGo music Ọhazi mepụtara Wondershare. The software-enye ndị ọzọ mgbanwe na ijikwa ọdịnaya nke gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ma ndị ọrụ nke Windows na Apple ngwaọrụ ike ibudata TunesGo na-eji ya inyere ha aka na n'ịkwụsị ihe mgbu nke na-ahazi ma na-ehicha gị n'ọbá akwụkwọ. Ngwa natara ndị kasị elu kpakpando mba si ọgwụgwụ-ọrụ ruru ka ala nke na-achịkwa ndị software.
Iji malite nhicha gị iTunes Ọbá akwụkwọ, ị ga-download na wụnye Wondershare TunesGo site na njikọ nyere n'elu. Ka anya dị ka nwụnye usoro completes, ngwa na-akpaghị aka syncs na tupu arụnyere iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Ozugbo omume niile bụ set, na-agba ọsọ, ị nwere ike na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru ọcha gị iTunes Akwụkwọ:
Iji na-ebute iTunes n'ihi na akpaaka-mmekọrịta, pịa Gbanwee na iTunes Ikwunye-na button si n'elu-nri akuku nke interface. Cheta: Mgbe ị malite Wondershare TunesGo, na ịpị Gbanwee na iTunes Ikwunye-na bọtịnụ na-aghọ mkpa iji ẹkedori iTunes na akpaaka-mekọrịta music n'ọbá akwụkwọ na ma ndị omume. N'aka nke ọzọ, mgbe ị malite iTunes nanị, Wondershare TunesGo panel na-akpaghị aka oru.
Ozugbo Wondershare TunesGo omume na iTunes ikwunye-na na-initialized na akpaaka-synched, pịa Music nhọrọ n'okpuru Library Atiya site n'aka ekpe ebi ndụ nke interface.
Pịa Jikwaa Music Library menu si Wondershare TunesGo panel na nri.
Site gbasaa nhọrọ, pịa nzacha na mkpocha iTunes Library.
Ozugbo mere, si gbasaa nhọrọ na-abịa elu ọzọ, họrọ onye na-anọchite anya njehie na ị chọrọ fix.
Mgbe ndepụta nke tracks na akpan akpan mgbochiume na egosiri, ị ga-họrọ faịlụ (s) na ị chọrọ fix.
Mgbe na-ahọpụta, họrọ ihe kwesịrị ekwesị ime / usoro ezi-na-akụ na configurations ka kwa gị proclivity.
Mgbe ndị chọrọ configurations e mere, pịa Chekwa bọtịnụ si n'elu-nri akuku nke window ịzọpụta mgbanwe.
Ozugbo ị nwere afọ ojuju na mgbanwe, ị nwere ike malite iji ọhụrụ nweta ume ma hazie n'ọbá akwụkwọ.
Rịba ama: Ị nwere ike ikwugharị Nzọụkwụ 4 na họrọ ọzọ gbasaa nhọrọ (otu otu) dị ka ezi-na-akụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ya.
Mmepe na-ekwu na Wondershare TunesGo nwere ike igosi na ihe aga-eme na iTunes ike. Dị otú ahụ ihe aga-eme na-agụnye ebufe data n'etiti multiple iOS ngwaọrụ, converting dị faịlụ ka Apple akwado formats, wdg
Nke a multi-ọtọ ngwá ọrụ na-abịa na a sleek na streamlined interface na-enweghị a nkpoda mmụta usoro. Nke a na-eme ka ọ adaba maka beginners iji Wondershare TunesGo na ala. Free ikpe version nke usoro ihe omume dị ma nwere ihe ole na ole na-agaghị emeli. Ya mere, ọ na-atụ aro ịzụta zuru version ka-esi ísì ya kpam kpam. The multiple ọnụ ọgụgụ nke aga-eme na ị nwere ike mfe ịrụ na TunesGo-eme ka ọ uru-akwụ kwuru price.
E wezụga nhicha ma na-ahazi gị music Ọbá akwụkwọ, Wondershare TunesGo nwere ọtụtụ ndị ọzọ dị ịrịba ọrụ. A ole na ole n'ime ha na-depụtara n'okpuru:
• Ị nwere ike mfe nyefee media faịlụ site na gị 'iDevices' iji iTunes na azụ na-eji ngwá ọrụ a.
• The ngwa-enyere gị aka nyefee faịlụ n'etiti gị iOS ngwaọrụ-enweghị na-azọpụta ya na gị na laptọọpụ PC.
• The dị faịlụ na-akpaghị aka converted Apple akwado format site usoro ihe omume.
• Ọ bụghị nanị na nke a ngwa-ahapụ gị hazie egwu gị collection, kamakwa ọ enye gị ohere ike ahaziri playlist.
• Ị nwere ike ijikọ ọ bụla Apple ngwaọrụ gị na desktọọpụ na kọmputa na iji Wondershare TunesGo.
• The software-enyere gị aka ike ahaziri foto albums iji hazie gị foto collection na a streamlined n'ụzọ.
• Ị nwere ike iji ngwa na gị na laptọọpụ PC ma ọ bụ kọmputa nke desktọọpụ ka ịmepụta ndabere nke ozi na kọntaktị na gị iOS ngwaọrụ.
Na a nutshell, Wondershare TunesGo na-enye gị a ọma ndibiat nke nhọrọ mgbe ọ na-abịa nhicha ma na-ahazi ihe dị na na ngwaọrụ gị. Ozugbo ị download software, ị pụrụ ịghọ gbasaghị banyere iTunes ihichapụ ihe dị mkpa faịlụ n'oge akpaka synching dị ka TunesGo-azọpụta ya niile. Nke a revolutionary ngwa bụ ezigbo ngwọta maka ndị na-achọ a oge na-azọpụta, Dịkwa n'Usoro ngwá ọrụ iji hazie data na media ọdịnaya na ha Apple ngwaọrụ.
> Resource> iTunes> Ihe kacha ụzọ Hichaa iTunes